बच्चाको ३१ ओटा औला, किन भयो त यस्तो जन्मजात ? – Wow Sansar
January 5, 2021 56
सामान्यतया सबै मान्छेको २ हात अनि २ खुटामा २० ओटा औला भएको कुरो त सबैलाई थाहा हुदै आएको हो, यो सत्यता पनि हो । एउटा अचम्मको कुरा हजुरलाई पत्यार नलाग्न पनि सक्छ ।
चीनमा एउटा यस्तो बच्चा जन्मिएको छ, जुन बच्चाको ३१ ओटा औलाहरु छन् । हो हजुरलाई अचम्म लग्यो, किन कि यस्तो घटना अहिले सम्म सुन्न मा आएको थिएन सारा बिस्व नै अचम्मित छन् । किन भयो त यस्तो जन्मजात ? भन्ने सबैमा अनुसन्धान को बिसय बने को छ ,
बच्चाको नाम हाग हाग राखिएको छ हुनसक्छ सबै खुटाको औला बाट हाँगा पलाए जसरी पलाएको छ। उनको उमेर भर्खर ४ महिना मात्र भएको छ। उनको हातमा ५ औला र खुटामा १६ औला छन् । २/ २ हाँगा पलाएको छ। सबै ठाउमा भने औला देखिदैन ।
डाक्टरको सल्लाह अनुसार बाचालाई पोलिदेख्टिज्म भएको भन्ने छ। यो सामान्य तय कुकुर बिरलोमा हुने गरेको थियो । अहिले मान्छेमा भएको देक्दा सबै अचम्मित छन्। अब यो समस्या सर्जरी गरेर हतौना सकिने चिकित्सक को सल्लाह राखेको बुझिएको छ।
चिकित्सकको अनुसन्धान अनुसार १००० जनामा एउटा बच्चामा यो समस्या देखिन सक्छ। यस्तो समस्या जन्मजात हुने र पारिबारिक जिन अनुसार नि पुस्तामा सर्न सक्ने भनिएको छ। बच्चाको आमाको पनि जन्म जात नै ६ ओटा औला रहेको जनाएको छ।
पेटमा बच्चा आएदेखि आम चाहिलाई पनि पुरै डर रहेको बुजिएको छ आखिर दुर्भाग्यबस आखिर बच्चामा पनि यो समस्या देखियो। उनको आम भने चिन्तित अबस्थामा देखिए। यस्तो उपचारमा करीब २ लाख चिनिया उआन लाग्ने डाक्टर हरुले बताएका छन्। सामाजिक संजालमा भने सहयोग को लागि खुब प्रचार गरिएको छ। एजेन्सी
Prevएकाबिहानै आयो खुसीको खबर सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको भाउ ।
Nextईन्दिरा जोशी र नायक कर्माबीच गहिरो प्रेम भएको खुलासा, बिहे बारे खुलेर गरे कुरा (भिडियो सहित)